के तपाईलाई थाहा छ ?बच्चा जन्माउने उत्तम महिना कुन हो ? – Sandesh Press
के तपाईलाई थाहा छ ?बच्चा जन्माउने उत्तम महिना कुन हो ?
January 26, 2021 186
संसारका अधिकांश प्राणीले जीवनचक्र चलाउन वा वंशको परम्परा धान्न बच्चा जन्माउने गरेका छन् । प्रकृतिले नै उनीहरुको यौन जीवन र सन्तान उत्पादन प्रक्रियालाई नियन्त्रण गरिरहेको छ । तर, मानवमात्र यस्तो प्रााणी हो जसले अन्य कुराको जस्तै यौन जीवनलाई प्रकृतिको नियन्त्रणमा रहन दिएको छैन ।
पछिल्लो समय मानिसले सन्तान जन्माउने उत्तम समय कुन हो भन्ने बारेमा विभिन्न बहस हुन थालेका छन् । ति बहस अनुसार वैज्ञानिकहरुले सन्तान उत्पादनका लागि उपयुक्त समय कुन भनेर अनुसन्धान थालेका छन् ।
यही भएर वैज्ञानिकहरुको ध्यान पनि कहिले बच्चा जन्माउँदा उपर्युक्त हुन्छ भन्ने तर्फ केन्द्रित भएको छ । अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिकहरु भन्छन, ‘बच्चा गर्भाधारणको लागि सबैभन्दा उपर्युक्त समय डिसेम्बर र जनवरी महिना हो ।’
५ करोड २० लाख गर्भवती महिलामा १२ वर्ष लामो समय लगाएर गरिएको अध्ययनमा धेरै दम्पत्तीले सन्तान जन्माउन यी दुई महिना रोजेको जनाएको छ सकभर गर्मी महिनामा गर्भवती नबन्न पनि अनुसन्धनमा संलग्न इन्डियन युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकहरुले सुझाव दिएका छन् ।
जनवरी र डिसेम्बरमा गर्भवती हुने महिला गर्भाअवस्थाको अन्तिम समयमा उच्च मात्रामा सूर्यको प्रकाश पाउने अध्ययन टोलीका प्रमुख डा पउल विनचेस्टरको भनाई छ । आमाले लिएको तापक्रममार्फत प्राप्त हुने भिटामिन डीले शिशुलाई स्वस्थ बनाउने उनीहरुको तर्क छ । जुन महिनामा गर्भाधारण स्वास्थ्यका लागि हानिकार हुने उनीहरुको दाबी छ । गर्मी मौसमा खेतीपातीमा प्रशस्त मात्रामा विषाधीको प्रयोग हुने र हावामार्फत त्यसको असर गर्भधारण गर्ने महिलामा पर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
अध्ययन टोलीले डिसेम्बरमा गर्भाधारण गरी सेप्टेम्बरमा बच्चा जन्माउने अभिभावकको संख्या बढी भएको जनाएको छ । ‘रसायनको मौसमी प्रभाव र आईभीएफ गर्भधारणमा भिटामिन डीको प्रभावबारे पछिल्लो समयमा चासो बढेको छ ।’ अनुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिकहरु भन्छन् । अध्ययन टोलीले जुनमा गर्भाधारण नगर्न पनि सबै दम्पत्तीलाई सुझाब दिएको छ ।
Prevतातोपानीमा परि बच्चाको यस्तो हालत, उपचारको लागि पैसा अभावका कारण छटपटाई रहेकी छन सेयर गरि सहयोग गर्नुहोस
Next१४० सर्प पालेकी महिलाको शव अजिङ्गरमा बेरिएको अवस्थामा भेटियो
लाहुरे राहुल भक्कानिदैँ भने- छोरीलाई भेट्न आइरहनु, बस्न मन लागे बसेर जानु (भिडियोसहित)
पति–पत्नीको एउटै राशि छ ? यी राशि हुने दम्पत्तिको हुन्छ गहिरो प्रेम !
घरमा तुलसीको विरुवा छ भने ध्यान दिनुहोस् यस्ता नियम, अन्यथा बनिएला पापको भोगी !
कक्षा १२ का बिधार्थीको परिक्षा नतिजा यसरी तयार पार्ने निर्णय।अत्यन्तै सजिलो हुने भयो बिधार्थीहरुलाई,पुरा हेर्नुहोस